သူ တော်တော်ကဲ – Grab Love Story
မလွှဲသာလို့သာ ရီလေးမှာ စက်ဘီးကို ဆွဲပြီး ထွက်လာရသည်။ ဒီကြည်ကြည်အေး ဆိုသော မိန်းမဆီကို သွားချင်တာမ ဟုတ်ပေ။ ဒီမိန်းမက ရပ်သိရွာသိ နှာဘူးမဖြစ်သည်။ အသက်က သုံးဆယ်လောက်။ လူကတော့ လှသည်။ မိန်းမချင်း မနာလို လောက်အောင် လှသည်။ သူက ဈေးရုံထဲတွင် ကလေးဝတ် အဝတ်အစားလေးတွေ ရောင်းသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက အဓိက အလုပ်မဟုတ်။ ဈေးထဲတွင် နေ့ပြန်တိုးပေးတာက ကြည်ကြည်အေး၏ အဓိကအလုပ်ဖြစ်သည်။ ကြည်ကြည်အေးဆိုင်မှာက ကောင်လေးတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ အမြဲစည်ကားနေသည်။ ရီလေးမှာ ကြည်ကြည်အေးကို ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်။ ကြည်ကြည် အေးက မုဆိုးမဆိုပေမယ့် အပျိုရှုံးလောက်အောင်ကို ဝတ်စားပြင်ဆင်သည်။ သေသွားသော ယောက်ျားထားခဲ့သည့် စီးပွား ဥစ္စာများနှင့် ချမ်းသာနေသည်။ ရင်ထဲက ဘယ်လိုပဲ မကျေနပ်ပေမယ့် တကယ့် တကယ်မှာတော့ ရီလေးမှာ ကြည်ကြည်အေး နှင့် မကင်းနိုင်ပါ။ မနက်ဖြန် မနက် အမေ့ကို ဆေးခန်းပြရမည်။ ဒါကြောင့် လိုသောငွေကို ကြည်ကြည်အေးထံမှ ယူရမည်။ အမေ့နှလုံးရောဂါက တစ်လတစ်ကြိမ် ဆေးခန်းသွားပြရသည်။ ဆေးခန်းက အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၏ ဆေးခန်းဆိုတော့ ငွေ ကလိုသည်။ ရီလေး အပ်ချုပ်ဆိုင်က ချုပ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် လိုသလောက်တော့ မရနိုင်။ ဒါကြောင့် လိုတာကို ကြည်ကြည်အေးထံ မနေ့ကတည်းက ပြောထားသည်။ အချိန်က ညနေ (၆)နာရီခန့် ဖြစ်နေပြီ။ ရီလေး လက်မှ လက်ပတ်နာရီ လေးကို ကြည့်ရင်း စက်ဘီးကို ဖိနင်းလိုက်သည်။ (၇)နာရီတွင် ရည်းစားဖြစ်သူ ခင်ထွန်းနှင့် ချိန်းထားသေးသည်။ ဒါကြောင့် ရီလေး၏ စိတ်တွေ လောနေတာဖြစ်သည်။
“ ဟယ်…ရီလေး…လာ….မမက မင်းကို စောင့်နေတာ….ခုပဲ အပြင် သွားတော့မလို့…ထိုင်အုံးနော်…” “ ဟုတ်ကဲ့….” ရီလေး အိမ်ရှေ့မှ ကော်ခုံတစ်လုံးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ကြည်ကြည်အေး အိမ်အတွင်းပိုင်းသို့ ဝင်သွားရာသို့ လှမ်း ကြည့်မိသည်။ မနာလိုစရာကောင်းလှသည်။ ကြည့်ပါအုံး။ ခါးက သေးသေးလေး။ အောက်ဖက်က တင်သားကြီးတွေက တလုံးတခဲကြီး။ လုံးတစ်၍ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တလှုပ်လှုပ် တုန်ခါနေသည်။ “ ဟင်း…” သက်ပြင်းချလိုက်ပြီး ရီလေးအကြည့်က အိမ်ရှေ့လမ်းမဖက်ဆီသို့ လွှဲလိုက်သည်။ “ ရီလေး…ရော့…ဒီမှာ ပိုက်ဆံ….” ရီလေး လှမ်းယူပြီး ငွေကို ရေလိုက်သည်။ “ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ထွန်းထွန်း တစ်ယောက်လည်း မတွေ့ပါလား…ဘယ်ပျောက်နေလဲ….” “ ဟင်…ဟို…” ဗြုံးကနဲ ရီလေး မျက်နှာလေးတစ်ခုလုံး နီရဲသွားပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားသည်။ ထွန်းထွန်းဆိုတာက ရီလေး၏ ရည်းစား ခင်ထွန်းကို မေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရီလေး တံတွေးတစ်ချက်မြိုချလိုက်ပြီးမှ…. “ ဟို…ကျမလည်း မတွေ့မိဘူး အမ…ပြန်အုံးမယ် အမ…အိမ်မှာ အမေတစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့တာ….” ပြောပြောဆိုဆို ရီလေးက မတ်တပ်ထရပ်သည်။ “ အေးအေး ညီမလေး….မှောင်နေပြီ….စက်ဘီး ကို သတိထားနင်း….” “ ဟုတ်ကဲ့ အမ…” ရီလေး စက်ဘီးကို ခပ်သုတ်သုတ်နင်းပြီး ပြန်လာခဲ့သည်။ အိမ်ပေါက်ဝမှ ရပ်ပြီး ရီလေးကိုကြည့်နေသော ကြည်ကြည်အေး၏ အပြုံးများက တဝတ်တပျက် ရပ်သွားသည်။
“ ငါကြားတဲ့ သတင်း ဟုတ်မှာပါ….ရီလေး နဲ့ ခင်ထွန်း ကြိုက်နေကြတယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ပဲ…ငါ တစ်ခွန်း ထဲ ထောက်လိုက်တာနဲ့ ကောင်မလေး မူပျက်သွားတာ….မဖြစ်ဘူး….မဖြစ်ဘူး…ကိုယ့်အိမ်ထဲက ပစ္စည်းတော့ သူများဆီ အပါမခံနိုင်ဘူး…ဟင်း….” ကြည်ကြည်အေး သက်ပြင်းချပြီး အိမ်ထဲ လှည့်ဝင်ခဲ့လေသည်။ ခင်ထွန်းတို့ ရီအေးတို့ဆိုတာက အသက်(၂၀) (၂၃) ဝန်းကျင်တွေဖြစ်သည်။ ခင်ထွန်းက ယောက်ျားပီသသော ရုပ်ရည်ရှိသည်။ အားတဲ့အချိန်မှာ မြို့ဦးဘုရားကြီးဝင်းထဲက ဝိတ်ရုံမှာ ကစားနေတတ်သူဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်း ကြံ့ခိုင်မှုကတော့ ပြောစရာမလိုပေ။ ခင်ထွန်းက ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ခင်ထွန်းတို့မှာက မိသားစုများ ကာ မပြေလည်သဖြင့် ကြည်ကြည်အေး၏ လောင်းရိပ်အောက်မှ မလွတ်ကင်းနိုင်ပေ။ ခင်ထွန်းက မွန်မွန်ရည်ရည်ရှိသည့်အ ပြင် ကြည်ကြည်အေးအိမ်ကို ဝင်ထွက်သွားလာပြီး လိုအပ်တာမှန်သမျှ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေသူဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ရီလေးဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကလည်း အကျည်းတန်သူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ။ အသားညိုညိုစိမ့်စိမ့် လေး၊ နှာတံစင်းစင်း မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြင့် သူ့နေရာနှင့်သူ အချိုးကျကာ အမို့အမောက် အသိမ်အကားလေးများဖြင့် အလှ တွေ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွားရှိသော မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ရီလေးမှာ ဆွပ်ခူးချင်သူတွေပေါသော ပန်းလေးတစ်ပွင့်ပင် ဖြစ်သည် ကြည်ကြည်အေး၏ အိမ်မှပြန်လာပြီး အိမ်သို့ ပိုက်ဆံဝင်ထား၍ ရီလေး ပြန်ထွက်ခဲ့သည်။ သူ ကြည်ကြည်အေးထံ သွားနေတုန်း အမေ့ညီမ သူမ၏ဒေါ်လေးအိမ်တွင် အမေရောက်နေသဖြင့် အမေ့ကို ရီလေး စိတ်ချသွားသည်။
ရည်းစားနှင့် တွေ့ရတော့မည်ဆိုတော့ ရီလေး ရင်တွေခုန်နေမိသည်။ ဒီတစ်ခါ ချိန်းတာက ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သည်။ နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ချင်တယ်တဲ့။ အရေးကြီးတာ ပြောစရာရှိလို့ လာခဲ့ပါတဲ့။ ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသည့်ကြားက ရီလေး၏ အတွေးထဲ တွင် ကြည်ကြည်အေး၏ ပြုံးစစမျက်နှာပေးက ပေါ်လာသည်။ ခင်ထွန်း သူ့ဆီမလာတာကို ရီလေးကို မေးရသည်တဲ့…။ ဘယ် လာမလဲ။ ရီလေးက မသွားရဘူးလို့ ခင်ထွန်းကို မှာထားတာ။ ဆိုင်ကယ်အုံနာခ ပေးစရာရှိတာကို ဆိုင်မပိတ်ခင် ဆိုင်မှာသွား ပေးလို့ ပြောထားသည်။ အကိုထွန်းကို ဒီမိန်းမနှင့် ဘယ်လိုမှ စိတ်မချနိုင်။ စိတ်ချစရာလည်း မရှိ။ ကြည်ကြည်အေး ဆိုတာက နာမည်ကြီး မုဆိုးမမို့ အပျိုတွေထက်ရဲသည်။ ကောင်လေးတွေနှင့် တရုန်းရုန်းနေသည်။ ဒီထဲမှာမှ အကိုထွန်းက ကြည်ကြည်အေး၏ အိမ်သို့ အဝင်အထွက်ရှိပြီး အရင်းနှီးဟု ဆိုရမည်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အကိုထွန်းကို ကြည်ကြည်အေးနှင့် အဖြစ်မခံနိုင်။ ရီအေး ရင်ကျိုးရမည့်အဖြစ်ကို အရောက်မခံနိုင်ပေ။ အခုလည်း ခင်ထွန်းက နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ချင်တယ်ဆို တာကို ရီလေး လက်ခံလိုက်တာ ဒီအကြောင်းလည်းပါသည်။ အရင်တုန်းက နှစ်ယောက်ထဲတွေ့ချင်တယ်ချိန်းတိုင်း ရီလေးက ရှောင်နေခဲ့သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြခဲ့သည်။ အခုတော့ အန္တရာယ်က နီးကပ်လာပြီဖြစ်တော့ သူ့ကို လိုက်လျောသင့်သ လောက် လိုက်လျောကာ ကိုယ့်ဖက်က အပိုင်ချည်ရန် လိုအပ်နေပြီ။ လက်ထပ်ဖို့ ကတိပြုသစ္စာဆိုထားကြတဲ့ သူတွေပဲဟာ။ ဘာနစ်နာစရာရှိတာမှတ်လို့ဟု ရီလေး တွေးရင်း စိုးရိမ်စိတ်၊ မခံချင်စိတ်တွေနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်။
“ လာ…ရီလေး…အိမ်ထဲဝင်….” အကိုထွန်းက ရီလေး၏ လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီး အိမ်ထဲသို့ ဆွဲခေါ်သည်။ “ ဦးလေးသိန်းရော…ဘယ်သွားလဲ…” “ ဦးလေးသိန်းက ဆိုင်ကယ်ညထွက်ဆွဲတယ်…နေ့ခင်းက အလှူအိမ်မှာ သွားပြီးလုပ်ပေးနေလို့….” ချိန်းသည့်နေရာက ခင်ထွန်းတို့ ဆိုင်ကယ်ဂိတ်မှူး ဦးလေးသိန်း၏ အိမ်တွင်ဖြစ်သည်။ ဝါးထရံကာ သွပ်မိုးဆယ်ပေ အိမ်လေး။ ဦးလေးသိန်းမှာ မိန်းမဆုံးသွားတာကြာပြီဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ခွဲ သားတစ်ယောက်က သူ့အိမ်နှင့်သူနေတာကြောင့် ဦးလေးသိန်းမှာ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယသမား ဖြစ်သည်။ အခုတော့ အိမ်တွင် ဦးလေးသိန်းမရှိ၍ ခင်ထွန်းနှင့် ရီလေးတို့ နှစ် ယောက်ထဲဖြစ်သည်။ “ ကဲ….ဘာပြောမှာလဲ အကိုထွန်း…နှစ်ယောက်ထဲ ပြောချင်တယ်ဆို….” “ ချစ်တယ်…ရီလေးရယ်….သိပ်ချစ်တာပဲကွာ….” အသံတုန်တုန်ယင်ယင်နှင့် ပြောရင်း ခင်ထွန်းက ရီလေးကိုဖက်ကာ နေရာအနှံ့ နမ်းတော့သည်။ လက်တစ်ဖက်က အင်္ကျီပေါ်မှပင် နို့အုံလေးတွေကို ချေပေးနေပြီး လက်တစ်ဖက်က ထဘီပေါ်မှပင် စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေသည်။ ရီလေးမှာ ပထမ ရုန်းကန်ငြင်းဆန်ရန် စဉ်းစားလိုက်သေးသည်။ နောက်တော့ ကိုယ်က ငြင်းလိုက်ရင် မငြင်းတဲ့သူရှိရင် ပါသွားနိုင်တယ်ဟုတွေးပြီး ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ငြိမ်နေလိုက်ကာမှ ရီလေး၏ ရင်ထဲတွင် လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ ဖိုလာသည်။ ခင်ထွန်းက သူမ၏ နှုတ်ခမ်းအစုံကို ဆွဲစုပ်လိုက်ပြီး ရီလေး၏ ကျောမှ အင်္ကျီဇစ်လေးကို ဖြုတ်ကာ အင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက် သည်။
ဘရာစီယာလေးအတွင်း မလုံတလုံဖြစ်နေသော နို့တင်းတင်းလေးနှစ်လုံးကို နမ်းနေသည့် ခင်ထွန်းမှာ အငမ်းမရဖြစ် နေသည်။ ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ လက်တစ်ဖက်ကို အသာဆွဲပြီး သူ့လီးကြီးကို အကိုင်ခိုင်းပြန်သည်။ ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးက အတော်ပင်ကြီးသည်။ သူမ၏ လက်ကလေးနှင့် အားကုန်ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ထားသည့်ကြားမှ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ရုန်းနေသေး သည်။ “ အင်း…ဟင်း….အကိုထွန်းရယ်….” ရီလေးတစ်ယောက် အရာရာကို မေ့လျော့ကာ အတွေ့နောက်သို့ ပါသွားချေပြီ။ သူမ၏ အသံလေးမဆုံးခင်မှာပင် ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်ပြန်ကာ စောက်ဖုတ်လေးကို ထဘီပေါ်မှ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတ်ပေးနေပြန် တော့ ရီလေး၏ စိတ်ထဲတွင် မရိုးမရွဖြင့် အားမလိုအားမရကြီး ဖြစ်နေရလေတော့သည်။ ခင်ထွန်းက ရီလေးကို ခေါင်းအုံးပေါ် လှဲ သိပ်ပေးလိုက်သည်။ ရီလေး၏ လည်တိုင်လေးများ နို့လေးနှစ်လုံးနှင့် ရင်ညွန့်သားလေးများကို နမ်းပေးရင်းက တဖြေးဖြေး အောက်ဖက်ကို လျောပြီး သူမ၏ ချက်ကလေးကိုပါ နမ်းပေးနေတော့သည်။ ရီလေးကလည်း အင်း…ဟင်း…ဟင်း…အသံ လေးများဖြင့် ညီးတွားလျက် သူမ၏လက်ကလေးများက ခင်ထွန်း၏ ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို ပွတ်သပ်ထိုးမွှပေးနေတော့ သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ရီလေး၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ လူးလူးလွန့်လွန့်ဖြစ်လာကာ သူမ၏ ပေါင်လေးတစ်ဖက်ကို ဆွဲ၍ထောင် ပေးလိုက်သော အချိန်တွင်တော့ ခင်ထွန်းက သူမ၏ထဘီလေးကို ဆွဲ၍ချွတ်ပေးလိုက်တော့သည်။
ထို့နောက် ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးပေါင်လုံးကြီးနှစ်ဖက်ကို နမ်းနေပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကိုတော့ လက်ဝါးကြီးနှင့် ပွတ်ပေးနေ၏။ အဲဒီနောက် တော့ ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ခေါင်းဝင်ပြီး မို့မို့လေးဖောင်းနေသော စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှင့်အသာ ဖြဲပြီး စောက်စေ့ချွန်ချွန်လေးကို သူ၏ လျှာကြီးဖြင့် ကလိပေးတော့သည်။ “ အ…အကိုထွန်း….အင်း…ဟင်း….အကိုထွန်းရယ်….ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်….အင်း….ဟင်း….အင်း….အား ….ဟ…အင်း….” ရီလေး၏ ခါးလေးမှာ ကော့ကော့တက်လာရင်း သူမ၏ အသက်ရှုသံများသည် ပြင်းထန်၍ လာရသည်။ “ အင်း…ဟင်း…ဟင်း….ရီလေး မနေနိုင်တော့ဘူးကွယ်….” ရီလေးက ပြောရင်း အားမလိုအားမရဖြင့် ခေါင်းအုံးကို သူမ၏ လက်ဖြင့် ဆုပ်ချေနေသည်။ ရီလေးတစ်ယောက် သက်ပြင်းချလိုက်တိုင်း စစ်ကနဲ ကျင်ကနဲ ခံစားရကာ ခင်ထွန်းက သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လျှာကို အဆုံးထိ ထိုးသွင်း လိုက်ချိန်မှာတော့ ရီလေး၏ ဖင်များက လူးရင်းလွန့်ရင်း ကြွတက်သွားရသည်။ ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ စောက်မွှေးများကို ဖွဖွ လေးဆွဲ၍ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားများကိုပင် သူ၏ နှုတ်ခမ်းကြီးများက ငုံပြီး စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းအတိုင်း ကလိပေးနေ ပြန်သည်။ ရီလေးခမျာ ကော့၍ကော့၍တက်နေရင်း စောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံး ပူနွေးလာပြီး ရင်ထဲတွင် ဟာကနဲ ဟာကနဲ ဖြစ်ကာ အသဲထဲထိ ကျင်ပြီး အေးစိမ့်သွားသည်။ တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ ရီလေး၏ စောက်စေ့လေးကို ခင်ထွန်း၏ လျှာကြီးက ကလိလိုက်သောအခါတွင်တော့ ဘယ်လိုကြီးခံစားသွားရမှန်း မသိ။ ခင်ထွန်း၏ ဦးခေါင်းကိုထပြီး အတင်းလှမ်းဖက်ဆွဲယူကာ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ်နမ်းပစ်လိုက်သည်။
ထိုအခါမှာတော့ ခင်ထွန်းက သူမ၏ ဖင်ကြီးတွေကို ဆုပ်ချေပေးနေပြန်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံး ကာမစိတ်တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်ကြွနေကြပြီဖြစ်သည်။ ခဏကြာသောအခါတွင် ခင်ထွန်းက ရီလေး ကို တစောင်းလှဲအိပ်ခိုင်းပြီး နောက်ကနေ ရီလေး၏ ပေါင်တစ်လုံးကိုမပြီး ဖြဲကာ နီတာရဲနေသော စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လီး ကြီးကိုတေ့ပြီး အသာအယာဆောင့်၍ သွင်းလိုက်သည်။ “ ဗြစ်…ပြွတ်…အ…အ…နာတယ်….အကိုထွန်းရယ်…ဟင်း….ဟင်း…..” ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးက ရီလေး၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ တဝက်မရှိတရှိဝင်နေပြီး စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး ပြည့်ကြပ်နေ သည်။ ခင်ထွန်းက လီးကိုဆက်ပြီး မသွင်းတော့ဘဲ နို့လေးတစ်ဖက်ကို ကုန်းစုိ့ပေးနေသလို ကျန်နို့လေးတစ်လုံးကိုလည်း လက်ဖြင့် ရွရွလေး ချေပေးနေသည်။ လီးကြီးက ဆောင့်ချက်မှန်မှန်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲတွင် ဝင်ထွက်နေသော် လည်း ရီလေးမှာ အားမလိုအားမရဖြစ်နေရခြင်းကြောင့် ဒီ့ထက် ဆောင့်အားကောင်းစေရန် သူမ၏ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ ကော့ကော့ပေးနေသည်။ “ ပြွတ်….ဖွတ်…အင်း…အား…ဖွတ်….ပြွတ်…ပြွတ်…အား….အား….” တစ်ခါတွင်တော့ မလုပ်တတ်လုပ်တတ်နှင့် ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ကော့အပေးနှင့် ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးက ဆောင့်အဝင် အံကိုက်ဆုံသွားကာ ရီလေးခမျာ ခင်ထွန်း၏ လီးကြီး ရင်ခေါင်းထဲထိ ရောက်သွားသလားဟုပင် အောက်မေ့သွားရသည်။ “ အ…အား…တစ်ခါထဲကိုပဲ အောင့် အောင့်သွားတာပါပဲ အကိုထွန်းရယ်….” ခင်ထွန်းက သူမ၏ နို့လေးများကို အတင်းချေပေးနေရင်း သူ၏ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုမြန်ဆန်လာလေသည်။
နှစ်ဦး သား ချွေးတွေရွှဲနေပေမယ့် ရင်ထဲအသဲထဲမှာတော့ အေးနေကြသည်။ “ ပြွတ်…ဗြစ်…စွပ်…ဖွတ်…ဖွတ်….အင်း….ဟင်း….အင်း….ဟင်း….အင်း….ဆောင့်….ကြမ်းကြမ်းဆောင့်စမ်းပါ…. အကိုထွန်းရယ်…ရီလေး ဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိဘူး….” ခင်ထွန်းက အတင်းဆောင့်၍ ဆောင့်၍ ကြုံးလိုက်သောအခါတွင်တော့ နှစ်ဦးသား ကာမပန်းတိုင်သို့ ရောက်သွားကြ ပြီး စောက်ရည်နှင့် သုတ်ရည်များ ရွှဲရွှဲစိုသွားကြလေသည်။ အတန်ငယ်ကြာအောင် နှစ်ယောက်သား ပက်လက်လှန်ပြီး အနား ယူနေပြီးမှ ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ခပ်မျှဉ်းမျှဉ်းစုပ် နမ်းသည်။ ရီလေးကလည်း အားကျမခံ ပြန်၍ နမ်း သည်။ “ အင်း…အကိုထွန်း…လှဲလိုက်ဦး…” နှုတ်ခမ်းခြင်းခွာ၍ ရီလေးက ပြောသည်။ ခင်ထွန်းက ရီလေး၏ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းနေရာမှခွာ၍ ပက်လက်လှန်ချ လိုက်သည်။ ထိုအခါ ရီလေးက လှဲနေရာမှ ဗြုန်းကနဲကောက်ခါငင်ခါ ထပြီး မာမာတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်ကာ စင်းနေသော ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်၍ နမ်းပစ်လိုက်သည်။ ရီလေးက အားရကျေနပ်စွာဖြင့်နမ်းပြီး ပြန်၍လှဲအချတွင် သူတို့နှစ်ယောက်မှာ တစောင်းလေး မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားသည်။ ရမက်စိတ်တွေပြန်၍ထလာပြီဖြစ်သော ရီလေးသည် သူမ၏ ပေါင်တစ်ဖက်ကို ခင်ထွန်း၏ အပေါ်သို့ခွတင်လိုက်သည်။ ခင်ထွန်း၏ လီးတန်ကြီးကလည်း ရီလေး အားရပါးရနမ်းပစ် လိုက်ပြီးနောက် တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်ကာ တစထက်တစ စံချိန်မှီအောင်ပင် မာတောင်လာနေပြီဖြစ်သည်။
အခုလို ရီလေး က သူမ၏ပေါင်ကြီးကို ခင်ထွန်း၏ပေါင်ပေါ်သို့ ခွတင်လိုက်ပြန်တော့ သူ၏ လီးတန်ကြီးမှာ ရီလေး၏ စောက်ဖုတ်နှင့် မလွတ်မ လပ်ဖြစ်ကာ ထိုးထောက်မိနေသည်။ ခင်ထွန်းသည် သူ၏ပေါင်တန်ကြီးတစ်ဖက်ကို ရီလေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ထိုးသွင်း လိုက်ရာက လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့၍ ခါးကြီးကော့ပြီး လိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ ဗြွတ်…ဖွတ်…အင့်…အင်း…ဟင်း…အကိုထွန်းရယ်….ဟင်း….ဟင်း….” ရီလေး၏ ခါးက တွန့်သွားရာမှ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ပေးလိုက်ရာ ခင်ထွန်းကလည်း သူမ၏ ခါးလေးကို ဆွဲဆွဲပြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးပါတော့သည်။ “ ပြွတ်…ပြွတ်…စွပ်…ပြွတ်…ဖွတ်….စွပ်…ပြွတ်…ပြွတ်…အား…အင်…ဟင်း….ဟင်း…ပြွတ်….ပြွတ်….” လီးတန်ကြီး တစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားပြီဆိုကတည်းက ရီလေး၏ မျက်လုံးတွေက မှေးစင်းကျသွားကာ သူမ၏ မျက်နှာ လေးမှာ ကျိတ်မနိုင် ခဲမရပုံစံမျိုးဖြစ်နေသည်။ ခင်ထွန်း၏ ဆောင့်ချက်တွေကလည်း စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိလှသလို ပြင်းလည်းပြင်း ထန်လှသည်။ လီးကြီးကလည်း သူမ၏ စောက်စေ့လေးကို ဖိဖိသိပ်သလိုဖြစ်နေ၍ ရီလေးမှာ အသဲခိုက်အောင် ကောင်းနေရ လေသည်။ “ မကြာမီမှာပင် ရီလေးက ခင်ထွန်း ကိုဖက်ထားသောလက်လေးများမှာ ပို၍တင်းကျပ်စွာ ဖက်လာသလို ခင်ထွန်း၏ လက်တွေကလည်း သူမ၏ ခါးလေးကို အတင်းပင် လှမ်းဖက်လိုက်တော့သည်။ “ ပြွတ်…ပြွတ်…စွပ်…ဖွတ်….စွပ်…ဖွတ်….အ…အင်း….အင်း….အင်း….အား….အား….” တခဏအတွင်းမှာပင် နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူပြီးသွားကြလေတော့သည်။
ဒီနေ့ ဆိုင်ကယ်အုံနာခကို ကြည်ကြည်အေး၏ ဆိုင်သို့ ခင်ထွန်းဝင်ပေးရာ ဆိုင်ပိတ်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဘေး ဆိုင်မှ ကြည်ကြည်အေးမှာ နေမကောင်းသဖြင့် ဆိုင်မထွက်ကြောင်း၊ ခင်ထွန်းလာလျှင် ညကျအိမ်သို့လာခဲ့ရန် မှာထား ကြောင်း ခင်ထွန်းကို ပြောပြသည်။ ရည်းစားဖြစ်သူရီလေး တားထားသဖြင့် ကြည်ကြည်အေး၏ အိမ်သို့မသွားဘဲ ခင်ထွန်းနေ ခဲ့သော်လည်း အခုတစ်ခါတော့ မတတ်နိုင်တော့ပါ။ သွားရပေတော့မည်။ ဆိုင်ကယ်အုံနာခကလည်း ပေးရန်ရှိသည်။ ဒီငွေက အုံနာခဆိုပေမယ့် ဆိုင်ကယ်ဖိုးကို အတိုးမရှိပြန်သွင်းနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သော ကြည်ကြည်အေးမှာ လည်း နေမကောင်းဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့ သူ့ကို အိမ်သို့လာခဲ့ရန် သေချာလည်းမှာထားသဖြင့် ခင်ထွန်းမှာ မသွားလို့ မဖြစ် တော့။ ကြည်ကြည်အေး၏ အိမ်သို့ ည(၇)နာရီလောက်တွင် ရောက်လာခဲ့သည်။ ခင်ထွန်းအိမ်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လိုက်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ရှေ့တွင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မတွေ့ရချေ။ ကြည်ကြည်အေး နှင့် အဖော်လာနေသော သူမ၏အဒေါ်ကြီးမှာ ရွာသို့ပြန်သွားတာ တစ်လလောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ခင်ထွန်းသိထားသည်။ ထို အဒေါ်ကြီးကို ခင်ထွန်း၏ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ပင် သင်္ဘောဆိပ်သို့ လိုက်ပုိ့ပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ပေါ်သို့ ခင်ထွန်းရောက်လာပြီး မည်သူ့ကိုမှ မတွေ့ရတော့ ခင်ထွန်း နားစွင့်ကြည့်မိသည်။ ပထမ ဘာသံမှမကြား။ နောက်မှ အခန်းထဲဖက်မှ တအင်းအင်း ညီး သံကြားရသည်။ “ အင်း…အင်း….အင်း….” ညီးသံက ဆက်တိုက်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်မို့ ခင်ထွန်းမှာ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ဘဲ အခန်းထဲထိ ဝင်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲက ကုတင်ထက်တွင်တော့ ကြည်ကြည်အေးမှာ ပက်လက်လေးလှဲနေပြီး တအင်းအင်းနှင့် ညီးနေသည်။ ခင်ထွန်း ကုတင်နားသို့ တိုးကပ်လိုက်သည်။ ကြည်ကြည်အေးကိုခေါ်ရန် ပါးစပ်ပြင်ပြီးတော့မှ မခေါ်ဖြစ်တော့ဘဲ အနီးကပ်မြင်တွေ့နေရ သော ကြည်ကြည်အေးကို ငုံ့ကြည့်နေမိသည်။
အမြဲတန်းလှလှပပနေတတ်သော ကြည်ကြည်အေးမှာ နေမကောင်းနေသော် လည်း မိတ်ကပ်ပါးပါးလေး လိမ်းထားသည်။ အသက်ရှုလိုက်တိုင်း ရင်သားထွားထွားကြီးတွေက နိမ့်ချီ မြင့်ချီဖြစ်ကာ လှိုင်းထ နေသလို ခပ်ကားကားဖြစ်နေသော ပေါင်နှစ်လုံးကလည်း တောင့်တင်းဖြောင့်စင်းလှသည်။ “ အင်း…အား…အမလေး….ဟင်း…ဟင်း….ချမ်းလိုက်တာ…ဖက်ထားစမ်းပါ….အင်း…အမလေး….” ကြည်ကြည်အေးမှာ ခေါင်းလေးခါယမ်းရင်း မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ခံစားနေရသော ပုံစံနှင့် စောစောကထက် အသံပိုကျယ်ကာ ညီးလာသည်။ အနားမှရပ်၍ သူမကို တပ်မက်စွာ ငုံ့ကြည့်နေသော ခင်ထွန်းမှာ ဗြုန်းကနဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမ သိ။ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်သွားရသည်။ “ အမ…အမ…” “ အင်း….အမလေး….ချမ်းလိုက်တာ….ဖက်ထားစမ်းပါ….အင်း….အမလေး….” ခင်ထွန်း ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပါ။ ခဏလောက် ဖက်လိုက်ရလည်း မနည်းဘူးဟူသော အတွေးဖြင့် ကုတင်စောင်း သို့ဝင်၍ ထိုင်ကာ ကြည်ကြည်အေးကို ငုံ့၍ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်လိုက်မိသည်။ ဒီလိုဖက်လိုက်ကာမှ ကြည်ကြည်အေး ဝတ်ထားသော အင်္ကျီ၏ အောက်တွင် ဘာမှ အခုအခံဝတ်မထားဘဲ လုံးဝန်းနူးညံ့လှသော အတွေ့နှင့်အတူ ဖွံ့ထွားသော နို့အုံ နှစ်လုံးက ခင်ထွန်း၏ ရင်ဘတ်သို့ မိန်းမောဖွယ် ထိတွေ့လာသည်။ ခင်ထွန်းထပ်၍ တိုးကာ တင်းကြပ်စွာ ဖက်လိုက်မိသည်။ “ အင်း….အင်း…ဟင်း…အင်း….အင်း….” တဖြေးဖြေး ကြည်ကြည်အေးမှာ ငြိမ်ကျသွားသည်။ နုဖက်နေသော ကြည်ကြည်အေး၏ အသားစိုင်များက ခင်ထွန်း ၏ ရာဂစိတ်များကို မီးထိုးပေးနေသည်။ ခင်ထွန်း သူ့စိတ်တွေကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပေ။ အတန်ငယ်မျှ ကြာသောအ ခါ ကြည်ကြည်အေးက မျက်လုံးလေးဖွင့်၍ ကြည့်လိုက်သည်။
“ ဟင်…အထွန်း…” ကြည့်လိုက်သော အကြည့်နှင့် ထွက်ပေါ်လာသောအသံက အလန့်တကြားပုံစံမျိုး လုံးဝမပေါက်သည့်အပြင် ညို့ယူ ဖမ်းစားလိုက်သော ရမက်အကြည့်နှင့် ရမက်သံလေးဖြစ်သည်။ ခင်ထွန်း၏ စိတ်တွေ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပါ။ သူမ၏ နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး ငုံ့နမ်းလိုက်သည်။ “ ချစ်တယ် မမရယ်….သိပ်ချစ်တာပဲ…” “ မင်းလိုပါပဲ…အထွန်းရယ်…” နှစ်ယောက်စလုံး၏ အသံတွေက တုန်ခိုက်နေကြသည်။ နှစ်ဦးသား စိတ်များကို လွှတ်ပေးလိုက်ကြကာ နှုတ်ခမ်းခြင်း စုပ်လိုက်ကြသည်။ တော်တော်နှင့် မခွာကြ။ ကြည်ကြည်အေးက ခင်ထွန်း၏ ကျောပြင်ကို ပြန်၍ဖက်ထားသည်။ ခင်ထွန်း၏ လက်များကလည်း အင်္ကျီပေါ်မှပင် ကြည်ကြည်အေး၏ နို့နှစ်လုံးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ချေပေးနေသည်။ မကြာမီ နှိပ်သီး လေးတွေကို တစ်လုံးခြင်း ဖြုတ်ပြီး ကြည်ကြည်အေး၏ အင်္ကျီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဘရာစီယာ လေးကိုပါ ဆက်ပြီး ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ခင်ထွန်းသည် ဖောင်းဖောင်းအိအိလေးဖြစ်နေသော ကြည်ကြည်အေး၏ နို့အုံလေး ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ပြီး စို့ပေးသည်။ ကြည်ကြည်အေးကတော့ သူမ၏ လက်ချောင်းလေးများကို ခင်ထွန်း၏ ဆံပင်များ ကြားသို့ ထိုးဖွပေးနေသည်။ ခင်ထွန်းက ကြည်ကြည်အေး၏ တင်သားကြီးတွေကို ပွတ်ပေးနေရာမှ သူမ၏ ထဘီကို ချွတ် လိုက်တော့သည်။ လီးနဲ့ဝေးနေတာ (၂)နှစ်ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သော စိမ်းစိမ်းညို့ညို့မို့ထွက်နေသည့် ကြည်ကြည်အေး၏ စောက်ဖုတ်လေးကို ရွရွလေးပွတ်ပေးနေသည်။
အနေရခက်သော ကြည်ကြည်အေးက ခင်ထွန်း၏ နှုတ်ခမ်းကြားသို့ သူ့လျှာ လေးထိုးသွင်းကာ နှုတ်ခမ်းကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ဟင့်…အင်း…အထွန်းရယ်….လိုးမှာဖြင့် လိုးတော့ကွယ်….မမ မနေတတ်တော့ဘူး….” ကြည်ကြည်အေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဒူးကွေး၍ ထောင်လိုက်ပြီး စိမ်းစိမ်းညို့ညို့ဖောင်းနေတဲ့ စောက်ဖုတ်အကွဲ ကြောင်းလေးထဲသို့ ခင်ထွန်းက သူ့လီးကြီးကို အသာတေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့သည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ပလွတ်…ပြွတ်…” “ အား….အား….နာတယ်….အထွန်းရယ်…” ခင်ထွန်း၏ ရင်ဘတ်ကို ကြည်ကြည်အေးက စုံတွန်းထားလိုက်သည်။ အရင်က အလိုးခံခဲ့ဖူးပေမယ့် မခံဖြစ်တာကြာ ပြီဖြစ်တော့ အသစ်ဖြစ်နေသော စောက်ဖုတ်က ကျဉ်းပြီး ကျိန်းနေသည်။ ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံးကတော့ ကြည် ကြည်အေး၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ တဆုံးဝင်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ကြည်ကြည်အေးသည် ခင်ထွန်းကို အသာဖက်ပြီး ထားလိုက် သည်။ “ ပြွတ်…ဖွတ်…စွပ်…ပလွတ်….ပြွတ်….ပြွတ်….အင်း…အင်း…အင်း…ဟင်း…” ခင်ထွန်းက လိုးနေရင်း ကြည်ကြည်အေး၏ နို့လေးများကို ကုန်း၍စို့လိုက်ရာ ကြည်ကြည်အေးသည် တင်ပါးလေး တွန့်သွားပြီး ရမ်းလိုက်ရသဖြင့် စောက်ရည်များမှာ ပို၍ထွက်လာရတော့သည်။ “ ပြွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်….ဖွတ်….” “ အင်း…အိုး…အင်း…အင်း…” ခင်ထွန်းက တစ်ချက်ခြင်း မှန်မှန်လိုးပေးလိုက်တော့ ကြည်ကြည်အေးက ခံနိုင်ရည် နည်းနည်းရှိလာသည်။ ကြည် ကြည်အေး၏ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများမှာ ခင်ထွန်း ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ခွက်ခွက်ဝင်သွားပြီး လီးပြန်ဆွဲအထုတ် တွင် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများမှာ လီးကို ကပ်ကပ်ပြီးပါလာကာ အပြင်သို့ စူ၍စူ၍ ထွက်လာကြသည်။
“ ပလွတ်…ပြွတ်…ဖွတ်….ဖွတ်…စွပ်….အင်း…ဟင်း….အထွန်းရယ်….” ထွက်လာသော အရည်များကြောင့် လီးဝင်လီးထွက်သံများ ပို၍ထွက်လာကြပြီး တရှိန်ထိုး ဆောင့်ဆောင့်ပြီးဝင်လာ သော ခင်ထွန်း လီးကြီးကို ကြည်ကြည်အေး၏ စောက်ဖုတ်အတွင်းသားလေးများက ညှစ်ပြီး ဆွဲဆွဲပေးနေသည်။ “ ပြွတ်…ဖွတ်…ပလွတ်…ဖွတ်…ဖွတ်…အင်း…ဟင်း…ဟင်း….အင်း….အင်း….” ခင်ထွန်းက အားရပါးရဆောင့်နေပြီး ကြည်ကြည်အေးက ကော့ကော့ပြီး အလိုးခံနေသည်။ “ ပြွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ဖွတ်…ဗလွတ်…ပြွတ်…ဟင်း…ဟင်း…နာနာဆောင့်စမ်းပါ….အထွန်းရယ်…မမ…ပြီးချင်ပြီ ….” ထိုအခါမှာတော့ ခင်ထွန်း၏ ရင်မှာလည်း ဗလောင်ဆူနေပြီမို့ အားကုန်ဆောင့်ပြီး လိုးပစ်လိုက်တော့သည်။ “ ဖွတ်…ပြွတ်…ဖွတ်….အား….အမလေး…လေး…အထွန်းရယ်…အား….အား….” အသံများနှင့်အတူ သူတို့နှစ်ဦးမှာ ထွေးနေအောင်ဖက်ထားပြီး သူတို့၏ ကိုယ်များမှာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တွန့်ခါ သွားတော့သည်။ “ ကောင်းလိုက်တာ အထွန်းရယ်…” ဟူသော ကြည်ကြည်အေး၏ လေသံသဲ့သဲ့လေးက အမောတကောလေး ထွက် လာလေတော့သည်။ ခင်ထွန်းနှင့် ကြည်ကြည်အေးတို့မှာ ကုတင်ပေါ်တွင် နှစ်ယောက်စလုံး အဝတ်အစားများ မရှိကြဘဲ ဝတ်လစ်စလစ် ဖြင့် ပက်လက်လှန်ကာ အနားယူနေကြသည်။ ခဏမျှကြာလျှင် ကြည်ကြည်အေးက ခါးတစ်ဆစ်ချိုးထထိုင်လိုက်ပြီး ခင်ထွန်း ၏ လီးကြီးကို ငုံ့ကြည့်သည်။ တစ်ချီပြီးသွားသော်လည်း လီးကြီးက မာမာတောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်နေသေးကာ အရည်တွေက စိုရွှဲနေသည်။ ကြည်ကြည်အေးက အနားမှ သူမ၏ ထဘီကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးကိုရော ပေါင်ကြားတစ်ခု လုံးကိုပါ သုတ်ပေးလိုက်သည်။
ထိုသို့ယုယုယယသုတ်ပေးနေရင်း ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးက တဖြေးဖြေးပို၍ မာကြောလာကာ ထောင်မတ်၍ ထလာသည်။ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထပြီး အားရစရာကြီးဖြစ်လာသည်။ ကြည်ကြည်အေးက ခင်ထွန်း၏ လီး ကြီးကို သူမ၏ လက်လေးတစ်ဖက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း သူမ၏ ဦးခေါင်းကို ဗြုန်းကနဲငုံ့လိုက်ပြီး လီးကြီးကို သူမ၏ ပါးစပ် ထဲသို့ ထိုးသွင်းကာ အားရပါးရ စုပ်တော့သည်။ “ အ…အင်း…မမ…အင်း…ဟင်း…” ခင်ထွန်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးမှာ တွန့်ကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီး ခါးကြီးမှာ ကော့၍ တက်လာသည်။ ပြီးတော့ ခင်ထွန်း၏ လက်နှစ်ဖက်မှာ ကြည်ကြည်အေး၏ ဆံပင်တွေကြားထဲသို့ ထိုးသွင်းကာ အားမလိုအားမရဖြင့် ပွတ်သပ်၍နေသည်။ ခင်ထွန်း ၏ မျက်နှာကမဲ့မဲ့သွားလျက် တအင်းအင်း ညီးညူ၍နေသည်။ ထို့နောက် ခင်ထွန်း၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ နို့အုံများဆီ ရောက်သွားပြီး ဆုပ်နယ်၍ ပေးနေသလို ကျန်သောလက်တစ်ဖက်ကလည်း ကြည်ကြည်အေး၏ စောက်ဖုတ်လေးကို လက် ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖြဲဖြဲပြီး စောက်စေ့လေးကို ကလိပေးနေသည်။ ကြည်ကြည်အေးမှာလည်း ခါးလေးတွန့်ပြီး တင်ပါးလေးတွေ ရမ်းကာ ကာမစိတ်တွေ အရမ်းပြင်းထန်၍လာသည်။ ကြည်ကြည်အေးက ခင်ထွန်း၏ လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ပြီး သူမ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ သွင်းလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်ကာ လျှာလေးဖြင့် ဒစ်ကြီးပတ်လည်ကို ယက်ပေးနေသည်။ ခဏအကြာမှာတော့ ကြည်ကြည်အေးသည် ပက်လက်လှန်နေသော ခင်ထွန်း၏ ကိုယ်လုံးကြီးပေါ်သို့ တက်ခွကာ လီးကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်လျက် သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့သွင်းကာ ခင်ထွန်း၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်သည်။ စူစူမို့မို့ လေးဖြစ်နေသော ကြည်ကြည်အေး၏ စောက်ဖုတ်လေးသည် လီးကြီး၏ ဒဏ်ကြောင့် အတွင်းသို့ ခွက်၍ ဝင်သွားသည်။
ကြည်ကြည်အေး၏ ဖင်ကြီးများ ပြန်၍ မြောက်လိုက်တော့ သူမ၏ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေက လီးကြီး၏ အကြောကြီး တွေနှင့် ညှိပြီး ပြန်ကြွ၍ ဖောင်းကားလာပြန်သည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ကာ မျက်နှာချင်းပူးကပ်နေပေမယ့် ခါးအောက်ပိုင်းက တော့ ပူးလိုက်ခွာလိုက်ဖြင့် ကြည်ကြည်အေးမှာ အပေါ်မှတက်၍ စိတ်ရှိတိုင်း လိုးနေသည်။ “ ဖွတ်…ဗြွတ်…စွပ်…ဖွတ်….ဖွတ်…အင်း…ဟင်း…ပြွတ်….ပြွတ်….” ခင်ထွန်းက အောက်ကနေ ကြည်ကြည်အေး၏ ဆောင့်ချက်အတိုင်း သူ့လီးကြီးကို ကော့ကော့ပြီး ပြန်ဆောင့်ပေးနေ ရင်း နို့လေးတွေကို တပြွတ်ပြွတ်ဖြင့် စို့ပေးကာ ဖင်သားကြီးများကို ဆုပ်နယ်ချေမွ၍ ပေးနေသည်။ “ ဖွတ်…ဗြွတ်…စွပ်….ဖွတ်….ဖွတ်…အင်း….ဟင်း….ပြွတ်….ပြွတ်….ဟင်း…ဟင်း…..” ကြည်ကြည်အေးမှာ အပေါ်မှနေ၍ စိတ်ထဲရှိတိုင်း ဆောင့်နေရာမှ တဖြေးဖြေး အသက်ရှုသံတွေပြင်းကာ မော၍လာ သည်။ “ ပြွတ်…စွပ်…ဖွတ်….ပလွတ်…ပြွတ်….ပြွတ်…ဟင်း….ဟင်း….အထွန်း….မမကို…လိုးပေးအုံး….မမ မောနေပြီ….” “ နေ…နေအုံး…မမ နားအုံးမယ်…” ကြည်ကြည်အေးက ပြောလိုက်လျှင် ခင်ထွန်းက သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ ဘေးမှနေ၍ မှောက်လိုက်ပြီး နို့လေးနှစ်လုံးကို တစ်လုံးစီ ခပ်မှန်မှန်လေး စို့ပေးသည်။
ယခုကဲ့သို့ နားလိုက်ခြင်းကြောင့် မောနေသော ကြည်ကြည်အေးမှာ အမောပြေစေသ လို ကာမရှိန်တက်နေတုန်းနားလိုက်သဖြင့် ကာမသွေးတို့က အထိုက်အလျောက်အေးသွားကာ ကာမအရသာကို ကြာကြာ လေး ခံစားနိုင်လေသည်။ “ အင်း…အထွန်း…ထအုံး…” ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ ကြည်ကြည်အေး၏ အသံက ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ ခင်ထွန်း သူ၏ ကိုယ်ကိုကြွ၍ ပြန် ထိုင်လိုက်သည်။ ကြည်ကြည်အေးက ကုတင်ပေါ်မှ ဖင်လျော၍ဆင်းကာ ကုတင်အောက်တွင် မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ “ လာ…အထွန်း…” ခင်ထွန်းကပါ ကုတင်အောက်သို့ဆင်း၍ ရပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါတွင်တော့ ကြည်ကြည်အေးက ကုတင်ဘောင်ကို လက်ထောက်၍ ကုန်းလိုက်သည်။ ကြည်ကြည်အေး၏ နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော စောက်ပတ်က အရည်လဲ့၍ ပြောင်တင်း နေသည်။ ခင်ထွန်းက သူ့လီးကြီးကို တေ့လိုက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည်။ “ ဗြစ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ပြွတ်…အား….အင်း….ဟင်း….ကျွတ်…ကျွတ်….ကျွတ်…အား….” အောက်သို့တွဲလောင်းကျနေသော နို့နှစ်လုံးကို ခင်ထွန်းက လှမ်း၍ဆွဲပြီး အားရပါးရ ဆောင့်လိုးသည်။ ကြည်ကြည် အေးကလည်း အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်၍ အံကြိတ်ပြီး ခံသည်။ “ ပြွတ်…ပြွတ်…ဖွတ်….ဖွတ်….အား….အား….ကျွတ်….ကျွတ်….” ကြည်ကြည်အေးကလည်း ခင်ထွန်း ဆောင့်အားကောင်းစေရန် သူမ၏ ဖင်ကြီးကို နောက်သို့တွန်းတွန်းပြီး ပြန် ဆောင့်ပေးသည်။ ကြည်ကြည်အေးမှာ ခါးကိုခွက်၍ ကုန်းထားသည့်အပြင် ခင်ထွန်း၏ ဆောင့်ချက်အားကလည်း ပြင်းသော ကြောင့် လီးထိပ်ကြီးက သားအိမ်ဝကို လာ၍ လာ၍ ထောက်နေသည်။
“ ပြွတ်…စွပ်…ဖွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်….” “ အင်း…အင်း…နာနာဆောင့်….အထွန်း….မမကို မညှာနဲ့….အင်း…ဟင်း….” “ ပြွတ်…ဖွတ်….စွပ်…ပြွတ်….ပြွတ်….” အသံတွေက ပိုမြန်လာပြီး လိုးအားကလည်း ပို၍ကောင်းလာသည် “ ပြွတ်…စွပ်…ပြွတ်….ပြွတ်…အင်း….ဟုတ်ပြီ…အင်း…အင်း….ဟုတ်တယ်….အမလေး….ကောင်းလိုက်တာ…အား. …အင်း….” မကြာခင်မှာပင် အဝင်အထွက်မှန်မှန်ဖြင့် လိုးနေသော လီးကြီးက ပို၍မာကျောကြီးထွားလာပြီး ငေါက်ကနဲ ငေါက်က နဲဖြစ်ကာ ကြည်ကြည်အေး၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်ကုန်တော့သည်။ ကြည်ကြည်အေးကလည်း သူမ ၏ တင်ပါးလေးရှုံ့ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်တော့ သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ စောက်ရည်များကလည်း ရှီးကနဲ ပန်းထွက်သွားတော့ သည်။ “ အထွန်း….မင်း မမကို တကယ်ချစ်တာလားဟင်….” “ အင်း…တကယ်ချစ်တာပါ မမရယ်….” ရည်းစားဖြစ်သူ ရီလေးထက်ပိုပြီး အပေးကောင်းကာ ပွင့်လင်းရဲတင်းသော ကြည်ကြည်အေးကို ခင်ထွန်း စွဲမိချေပြီ။ “ ဒါဆို မမကို လက်ထပ်ပါလား…” “ တကယ်ပြောတာလား…မမ…” “ တကယ်ပေါ့…” “ ဒါဆို မမကို ကျနော် လက်ထပ်ပြီး ယူမယ်…” “ ဘယ်တော့လဲ….အထွန်း…” “ အခုထဲက အိမ်မပြန်တော့ဘူး…ဒီမှာ မမနဲ့ပဲ အိပ်တော့မယ်….” “ အို…ခစ်…ခစ်…သူ တော်တော်ကဲ….” “ မမကလည်း ချစ်ဖို့ သိပ်ကောင်းတာကိုး…” “ ခစ်…ခစ်…ခစ်…ခစ်…” ကြည်ကြည်အေး၏ သဘောခွေ့စွာ ရယ်မောလိုက်သော အသံလေးက လွင့်ပျံ့၍သွားပါလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ